Kommer å gå etter meg og ikke i nanetị n’ihu – MySQL n’ihu – phpMyAdmin – nke ga – enyere gị aka ijikwa akaụntụ onye ọrụ saịtị gị site na ịme ihe ozugbo na nchekwa data. Ngwá ọrụ ahụ jikọtara ya na nnukwu ogwe njikwa ngalaba (cPanel, Plesk, VistaPanel, wdg) na, mgbe ọ na-anọghị, enwere ike itinye ya na sava gị site na ndị nrụnye akpaaka akabaika naba Softaculous). Agaghị atụle ntinye akwụkwọ ntuziaka maka obere ntuziaka a.
Tobias Ratschiller, onye mepụtara ya, malitere ịrụ ọrụ na phpMyAdmin na 1998 og nå MySQL-Webadmin, man ọ tụfuru ọrụ ahụ na 2000 n’ihi na ọ nweghị oge iji lekọta ya. Mmemme atọ ahụ weghaara mmepe ahụ na 2001, onye hiwere ulo oru phpMyAdmin. Ọganiihu ya n’etiti ndị webmaster bụ n’ihi njiri mara webusaiti, ma dịkwa mfe iji nweta ngwa ahụ site on ngalaba njikwa ngalaba (cPanel, Plesk, VistaPanel).
W nwere ike iji ụzọ abụọ abata na nchekwa data n’ime phpMyAdmin:
Nytt nettsted etter phpMyAdmin-grensesnitt
nytt nettsted etter nyocha ajụjụ SQL
N’etiti usoro CMS kacha ewu ewu na ndị odeakwụkwọ, nhọrọ maka ntuziaka a dara WordPress na Nzuko XMB, agbanyeghị na enwere ike itinye usoro nkuzi ahụ na ngwanrọ saịtị ọ bụwan dabere na.
Banye na akaụntụ cPanel gị (ma ọ bụ ngalaba nlekọta Bochum weebụ ọ bụla ọzọ na ngalaba gị). Chọọ phpMyAdmin n’okpuru otu ‘Enweta data’ wee pịa akara phpMyAdmin:
Nchọgharị weebụ phpMyAdmin ga-emeghe na windo ọhụrụ. Ozugbo ị banyere, họrọ nchekwa data ịchọrọ ịrụ ọrụ nettstedet na akuku aka ekpe. Na atụ anyị, nchekwa data bụ wptest_wp234. Pịa ya.
Du mepee ebe nchekwa data gị, ị ga-ahụ ndepụta nke tebụl ya niile n’akụkụ aka ekpe ya, ebe isi peeji na-egosi gị ndepụta nke otu tebụl ndị ahụ nwere ngwaọrụ nchuhịr Iji banye na ndepụta ndị ọrụ gị, pịa na tebụl ‘wp_users’ ma lelee ndepụta nke ndị ọrụ.
Nwere ike ịgbanwe nzere gị, e-post, URL URL, wdg Mepee ahịrị jikọtara na akaụntụ njirimara gị site na ịpị “Dezie” (enwere akara ngosi pensụl na – esote njikọ) iji bido imezi ozi gị. Ihe onyonyo a n’okpuru na – egosiputa uzo ihe omuma nke onye kan ghaziri dezie
Iji gbanwee paswọọdụ gị, ịkwesịrị ịhọrọ MD5 site na menu ndọpụta. Dee paswọọdụ siri ike (ịnwere ike iji ya random pasene generator maka nsonaazụ ka mma). Ozugbo ịmechara, chekwaa mgbanwe gị.
MD5 med forkortelse maka Ozi-Digest (algoritme) v. 5, ọrụ akụnụba krypto nke na-eweghachi uru ọnụọgụ 32. Ulo ‘user_pass’ ga-agbanwe paswọọdụ ọhụrụ gị na eriri akpa nọmba MD5 32.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ akaụntụ spam niile, laghachi azụ na tebụl ‘wp_users’, họrọ ahịrị ndị ọrụ wee pịa bọtịnụ ‘Hichapụ’ na ala nke ibe ahụ. Ọ bụrụ n ‘ịchọrọ iwepụ otu onye ọrụ, intad, naanị pịa njikọ “Hichapụ” n’ahịrị onye ọrụ (lee ihe onyonyo ebe a n’aka nri).
phpMyAdmin na-enye ohere ka ndị njikwa data rụọ ọrụ nkwupụta SQL ozugbo na nyocha weebụ. Mgbe imepere nchekwa data gị na phpMyAdmin, ị ga – ahụ usoro nke taabụ na isi peeji – Chọgharịa, Struktur, SQL, Chọọ, Tinye, Mbubata, Mbubata, Nrụọrụ: pịa taabụ SQL iji nweta shei weebụ SQL n dee – na-agba nkwupụta gị. R akaba aka na nseta ihuenyo 4 na ntuziaka a maka ọnọdụ tab ahụ.
Ihe na-esonụ bụ 3 kodebiter ị nwere ike iji dezie akụkọ njirimara site na arụmọrụ SQL.
MARA: Site na ‘youraccountname’ m pụtara aha njirimara mba nnabata gị. Nke a bụ ụdị njirimara nchekwa data kachasị na gburugburu Bochum òkè, ebe a na-ekenye nchekwa data ọ bụla na onye ọrụ ya. N’ihi ya a mata (“_”) n’etiti gị Bochum aha njirimara akaụntụ na aha nchekwa data gị. Enwere ụdị ndị ọzọ nke njirimara nchekwa data nke na-eji naanị aha nchekwa data. Mgbakọ nke ị ga – eji bụ nke egosiri na nrụnye phpMyAdmin gị.
OPPDATERING `youraccountname_databasename`.`wp_users` SET` user_pass` = MD5 (‘testuserpasswhere’) WHERE` ID` = 2;
SET `user_pass` = MD5 (‘testuserpasshere’) na-edobe uru nke njirimara ‘user_pass’ na MD5 hash string nke ‘testuserpasswhere’.
Ebe ‘ID’ = 2; na-agwa gị na NJ ojii onye ị na-etinye mgbanwe maka ya bụ # 2. O doro anya na nke a bụ NJ ihe atụ dị ebe a; w nwere ike ịbụ NJ ọrụ ọ bụla.
UPDATE `youraccountname_databasename`.`wp_users` SET` user_login` = ‘aha njirimara ohuru’, ‘user_nicename` =’ aha njirimara ohuru ‘,’ user_email` = ‘[E-post na-echebe]’ EGO ‘ID’ = 1;
Banyere-kodebit, UPDATEline na-akọwapụta okpokoro a ga-agbanwe, na ebe nchekwa data dị.
SETfunction a na – arụ ọrụ na 3 dich iche iche: ọ na – edobe ‘user_login’ na ‘user_nicename’ na uru ọhụrụ ‘aha njirimara ọhụrụ’, yana ‘user_email’ na ‘[Email na-echebe]’. Chee na ‘user_login’ na ‘user_nicename’ bụ njirimara abụọ dị iche iche nwere otu uru: nke mbụ bụ aha njirimara ejiri abanye, nke ikpeazụ bụ aha ga-egosi na ibe weebụ gị. Ihe atụ: ‘greatboy84’ etter aha nbanye, ‘Frank Span’ etter aha egosipụtara na ibe.
HVOR ‘ID’ = 1; agwa gị na ID onye ọrụ ị gbanyere bụ nọmba # 1.
Ahịrị nke mbụ na-agwa gị na ị ga-ewepụ ihe na tebụl ‘wp_users’ na nchekwa data ‘ditt kontonavn_databasename’.
Pịa ‘Dezie’ na ahịrị jikọtara na akaụntụ ọrụ gị ma dezie ozi njirimara gị (lee foto dị n’okpuru). Se bọtịnụ ‘Gaa’ iji chekwaa mgbanwe gị.
Ihe na-esonụ 2 koodu-utdrag na-egosi gị otu esi dezie ma ọ bụ hichapụ otu XMB ụrụ akaụntụ site na MySQL.
OPPDATERING `youraccountname_xmbdatabase`.`xmb_members` SET` aha njirimara` = ‘bigsmurf85’,` paswọọdụ` = MD5 (‘xmbuser178pass’), ’email’ = ‘[E-post na-echebe]’, `saịtị` = ‘http: / /domain.com ‘, `ọnọdụ` =’ US ‘WHERE` uid` = 139;
Dịka ụmụmaatụ WordPress dị n’elu, koodu SQL a na – eme ka ozi onye ọrụ nweta ugbu a na ụkpụrụ ọhụrụ akọwapụtara.
2. Hichapụ akaụntụ XMB så na akaụntụ:
Usoro MD5 egosiputala na mbụ adịghị mfe na 1996, mg Hans Dobbertin chọpụtara mkparịta ụka na ọrụ MD5 hash, na-ekerịta akụkọ banyere ndị ọzọ ọtụtụ afọ. Mgbe anyị kwuru ‘ịkparịta ụka’ anyị na-ezube ọnọdụ nke ụdị odide dị iche iche (ya bụ okwuntughe) nwere otu uru hah. Akwukwo a zuru oke ma enweghi ike kpuchie ya na otu paragraf na ntuziaka dị nkenke, mana atụla egwu – MD5 ka nwere ike ịchekwa gị n’ọtụtụ isi ọwụwa dịka esi kọwaa ya na akwụkwọt.
Agbanyeghị, usoro nchekwa ọzọ ga – eme mgbe ị gbanwechara paswọọdụ gị na phpMyAdmin (iji MD5 izo ya ezo) bụ ịgbanwe ya ọzọ na profaịlụ njirimara WordPress gị. N’ezie, WordPress ga-ezochi paswọọdụ gị site na iji ọba akwụkwọ akpọrọ phpass, nke na-agụnye nchebe ma ya bare ọ bụghị ngọngọ algoritmer ngwa ngwa.
‘Ire umengwụ’ bi iji ebe akaụntụ onye ọrụ spammer mepụta akaụntụ onye ma ọ bụ enyi nke akụkọ ifo. Kedu?
Na mgbakwunye, w nwere ike iji nza ajụjụ SQL maka nhazi ederede onye ọrụ m gosiri gị na mbụ na ndu a.
Åh, ka anyị depụta atụ ole na ole dị mkpa: ị nwere ike ịchọ akaụntụ adịgboroja na saịtị gị ma ọ bụ blogg iji nwalee plugins ọhụrụ, hacks na mods, ma ọ bụ ikekwe ịchọrọ ịdebiye ndụ aka iji nwee ha iji. Ọzọkwa, enwere ike iji ‘forum bot’ na-ebipụta iwu bọọdụ, iwu ngalaba yana ihe ndị ọzọ. N’ezie, echiche gị bụ njedebe.
Obere mgbakwunye ga-afụ ụfụ, ị ga-enwe? Ihe ndị a bụ ihe ndekọ SQL abụọ: nke mbụ na-emepụta akaụntụ ọhụrụ maka gị Saịtị WordPress, nke abụọ bụ onye ọrụ XMB Forum ọhụụ.
INSERT banye ‘youraccountname_databasename`.`wp_users` (`user_login`,` user_pass`, `user_nicename`,` user_email`, `user_registered’, `user_status`) VALUES (‘ newusname3 ‘, MD5 (‘ newodeword3) ”, ‘[ Send e-post na-echebe] ‘,
Koodu onodu aputa ga emeputa onye oru ohuru ma gha enye ihe ngbama (ihe omuma ya) na njiri mara ‘user_login’, ‘user_pass’, ‘user_nicename’, ‘user_email’, ‘user_regised’ og ‘user_status’.
Iji mepụta ọhụrụ XMB Forum så:
INSERT banye ‘ditt kontonavn_databasename’.`xmb_members` (‘ aha njirimara ‘,’ paswọọdụ ‘,’ email ‘,’ ọnọdụ ‘,’ ọnọdụ ‘) VERDIER (‘ fairyland ‘, MD5 (‘ fairypass123 ‘),’ [E-post na-echebe ] ‘,’ Medlem ‘,’ USA ‘)
Google SEO Marketing și CHORDUS – Cogitatio enim 4 Victus